Iyo Bahamas Yevashanyi Hofisi muParis Inovhara Nekuda Kwekugadzirisa Nyowani
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bahamas Kuputsa Nhau » Iyo Bahamas Yevashanyi Hofisi muParis Inovhara Nekuda Kwekugadzirisa Nyowani
Bahamas Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • France Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Bahamas Ministry of Tourism, Investment & Aviation munguva pfupi yapfuura yakazivisa kuti, muna Gumiguru 4, 2021, ichavhara yayo Bahamas Yevashanyi Hofisi (BTO) muParis, France.
Zviri nekusuwa kuti iyo Ministry of Tourism yatora danho rekuvhara iyo Bahamas Yevashanyi Hofisi muParis.
Iyo yekuenda iri kugadzirisa marongero ayo ekutengesa ekondinendi yeEurope uye nekumisikidza kushanya kwayo kwekushanya kumusika uyu.
London-yakavakirwa Bahamas Yevashanyi Hofisi ichave muzinda wekushambadzira kwenyika ino muUK uye Europe.
Kuvharwa kweBTO Paris kunouya pakati pekugadziriswa kwenzvimbo yekutengesa nzira yekuenda mukondinendi yeEurope. Kugadziriswazve kwekushanya kweBahamas kumusika uyu kuchaona iyo London-based Bahamas Tourist Office ichiva muzinda wekushambadzira kwenyika kuUK nekuEurope. Bahamas Yevashanyi Hofisi muParis ndiyo yaive yekutanga yemahofisi epasirese epasi rose ekushambadzira kuumbwa mukondinendi yeEurope. Tichifunga kukosha kwakaita hofisi iyi, zvinosuwisa kuti Ministry yakatora danho rekuvhara BTO Paris.
Kutaura nezve kuvharwa kuri pedyo kwe The Bahamas YeVashanyi Hofisi muParis, Tourism Director General Joy Jibrilu akati, "Sezvo Bazi redu parinopedzisa kuvapo kwedu kwekugara muParis, ndinoda kutora mukana uno, pachinzvimbo cheMutevedzeri weGurukota Gurukota Anoremekedzwa I. Chester Cooper, Gurukota Tourism, Investment & Aviation, uye iyo yese Bahamas Yekushanya Chikwata, yekutenda pachena Mutariri weNharaunda, Mai Karin Mallet-Gautier, kwemakore avo makumi matatu nemana ekuzvipira basa vachitungamira kufambisa kwekushanya kweBahamas muFrance.
“Mai. Mallet-Gautier. Kwemakore mazhinji aya, Mai Mallet Gautier vakatungamira kuuraya pasi pechirongwa cheBahamas chekutengesa muFrance, izvo zvakaguma nekugadzwa kwenzvimbo yevatendi vanofamba vakatendeka avo vakabatsira kwatiri kuenda mukuveza mugove wemusika wakatsiga. yevafambi veFrance. Tinoda zvakare kutenda Mai Clémence Engler, uyo akabatana neBTO Paris makore maviri apfuura semumiriri wekutengesa nekutengesa. Basa raAmai Engler rave kubatsira zvikuru mukuita kwedu muFrance. ”
Iyo Bahamas Ministry of Tourism, Investment & Aviation yakazvipira kune hukama hwayo hwakareba nevashambadziri vayo indasitiri muFrance. Izvo zviwanikwa zvekushandira vamwe vedu kuenderera mberi kwekukura kweBahamas bhizinesi rekufamba zvichagadziriswa kubva kuBahamas Yevashanyi Hofisi muLondon, pasi pekutarisirwa kweMinistry yeEuropean Ministry, Mr. Anthony Stuart.
Vanhu veZviwi zveBahamas vanotarisira kuburitsa mameti ekugashira kuzviuru zvevashanyi veFrance vanofamba gore rega kuzviwi zvedu.